I-Cheshire, emaphandleni, Indawo yasemaphandleni yabucala. - I-Airbnb
I-Cheshire, emaphandleni, Indawo yasemaphandleni yabucala.
Ipropathi idityaniswe nendlu enkulu, kunye nokungena kwayo. Ibandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokuhlala kunye nocango olutshixiwe phakathi kwendlu kunye nendlu enkulu. Yabucala ngokupheleleyo, Seta kwindawo yasemaphandleni, elungele ukuhamba. Ngaphakathi kweemayile ezi-5 ze-M56 kunye ne-M6 yemoto. ngaphakathi kwe-40mins yeLiverpool Manchester kunye nesikhululo seenqwelomoya saseManchester. IChester kunye neCheshire Oaks zifikeleleka ngokulula. I-pub yasekuhlaleni yamkela izinja ezi-2km kude. Umphambili womlambo. Indawo yokupaka eyaneleyo. Unxulumaniso neWeaver Way phakathi kwe-500m kunye neFama yaseWoodland Trust Dutton Park.
Ipropathi inamagumbi okulala ama-2, enye inokwenziwa ibe ziibhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga. Sinegumbi elincinci lokomisa ukuba ubuphumile uhamba kwaye iindwendwe ziyakwazi ukuhlala ngasemlanjeni zibukele izilwanyana zasendle okanye ziphumle nje. Ngasemva kwepropathi kukho indawo yokuhombisa enebhentshi yepikiniki.
4.88 · Izimvo eziyi-305
Indawo yokuhlala ikwindawo yasemaphandleni enenye indlu enye kuphela phakathi kwe500m. Ezona ndawo zikufutshane sisikhululo sepetroli esineGreggs kunye neCosta café: 2km kude. Akukho zithuthi njengoko zimi ekupheleni kwendlela yabucala engekamkelwa. Vula amabala kunye neendawo ngeenxa zonke. Iindlela ezininzi ezizodwa ecaleni koMlambo i-Weaver, i-canal towpath kunye nokutyhutyha ihlathi. Ngelixa ngaphakathi kwe-40mins yeLiverpool kunye neManchester kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eCheshire Oaks Outlet Village kunye nesikhululo seenqwelomoya saseManchester. Kukho indawo yokusela ngaphakathi kwe-2km kunye negumbi leti elithandekayo ngaphakathi kwe-3km. Ngaphakathi kwe-1km kukho indawo yegadi enegumbi leti. (Iigadi zeBluebell cottage: nceda ujonge kwi-intanethi ngamaxesha atshintshayo okuvula ngenxa ye-COVID)
Umnini ufumaneka 24/7 ukuba kufuneka ngefowuni.